Posts 378 · Viewed 73272 · Likes 134 · Go to Last Post
· Snapshot 71555
छि छि बिर्खे ब्रो … मेरो अगाडी छोल्ने कुरै न गर्नुस हजुर … म पुरै साधुबाद भइसके … यो बर्ष अब "गेटिंग लेड" को गोल नि त्यागि दिए ! तर एस्तो साधुचार्य जीवन जिउँदा जिउन्दै पनि बिहान बिहान किन सधै मेरो धुक्कुर फलामको रड जस्तै सारो भएर दुख दिने होला मलाइ बिर्खे ब्रो ? 😭
Last edited: 13-Jan-21 08:50 AM
· Snapshot 71675
"मेरो धुक्कुर फलामको रड जस्तै सारो भएर दुख दिने होला मलाइ बिर्खे ब्रो "
तै भएर ढुक्कुर लाइ कहिले कहिँ पोखरी मा डुबुल्की मार्दै गर्नु पर्छ नाज ब्रो। मैंले नि कोभिड सुरु भएदेखि चाख्न पाको छैन। Flingster मा क्याम मा हस्ते हानेरै काम चलिरहेको छ अहिले सम्म। अस्ति १ चोटि त नेपाली केटी (प्रोभिन्स ३ को) परिरा। नेपालमा नि केटिहरु अनलाइन क्याम हेर्दै हस्ते हान्ने क्रम बढेको रैछ नि नाज ब्रो
· Snapshot 71693
Stock मा त्यत्रो पैसा कमाउने साहुहरु पनि यसरी हस्ते हान्दै बस्ने रहेछन है । हुनत अरूलाई के भन्नु Jeffery robbin लाई हेरेर नै थाह हुन्छ नी, यो कति व्यापक छा भनेर ।
उताबाट रेकर्ड गर्ला फेरि बिर्खे ब्रो ।
Last edited: 13-Jan-21 12:11 PM
· Snapshot 71700
"Stock मा त्यत्रो पैसा कमाउने साहुहरु पनि यसरी हस्ते हान्दै बस्ने रहेछन है"
बाहिर गएर पैसा तिरेर मन लाग्दैन न नि त ब्रो। त्यसरी गरेको के मज्जा र? बरु १ जना साथी नेपाल बाट ट्रेनिङ लाइ आउदै छ अनि १ जना प्वाट मिलाइदे है तेताको चाखुम भनिरछ। आपत छ मलाइ, आफै त त्यस्तो गरिदैन। सक्दिन भनुभने तेतिनि गरेन, फलानाले त कति मिलाइदिन्छ रे भन्न थाल्छन केटाहरु। म चै पैसा तिरेरा आलु खान मन लाग्दैन ब्रो
"उताबाट रेकर्ड गर्ला फेरि बिर्खे ब्रो"
पेट देखि मुनि तिघ्रा माथि को भाग देखाउने हो सलाम ब्रो। कहिले काँही टङ देखा सम्म चै भन्छन 🙈🙈😳😳
· Snapshot 71759
"Flingster मा क्याम मा हस्ते हानेरै काम चलिरहेको छ अहिले सम्म।"
थुक्क … पाजी ब्रो … 😂🙏
बिर्खे ब्रो मैले नि जमानामा त् नेपालि केटिहरुलाइ याहु च्याट र ओमेगलमा पुरा धुक्कुर देखाको हो नि … सार्है गति छाडुवा हो म नि ! 🙈
Last edited: 14-Jan-21 10:04 PM
· Snapshot 71794
Lol NAS bro, मैले पनि yahoo मा, dubai मा काम गर्ने फिलिपिनो नर्स छम्मा संग निक्कै चल्यो । अहिले जस्तो स्क्रीन रेकर्ड सफ्टवेयर भएको भए आफ्नो कति बेइजत हुन्थ्यो होला। एउटा सब्द खुब use हुन्थ्यो, ए यस यल :)
बिर्खे ब्रो अनुहार नदेखिए सम्म आफ्नो त उठ्दै उठ्दैन । बरु तल को नदेखिए पनि रियल मान्छे ले अनुहार को मुख को expression देखाए राम्रो लाग्छ ।
· Snapshot 71837
त्यो पो जमाना थियो है क्रिश्ने ब्रो !
अस्ति एक ताका निन्द्रा नलागेर ओमेगल छिरेको त् … लाँडै लान्ड़ो को मात्र दर्शन भएर उल्टी मात्र निस्केन होला … अनि बल्ल एउटीको बुब्स देखे ! अनि एसो कुरा गर्दै गाको जान्ठी हो कि जान्ठोले भिडियो प्ले ब्याक गरेको जस्तो लाग्यो बुबु देखाको ! अनि मलाइ भेन्मो गरिदे म पुती नि देखाउछु भनिन ! मैले नि ल म एप डाउनलोड गर्छु भन्दै एति झुल्लाये … लास्टमा वाक्क दिक्क प्याक्क भएर रन्डीले मलाइ त् किक नै गरि दिइन ! 💩😂
Last edited: 13-Jan-21 03:39 PM
· Snapshot 71861
· Snapshot 71911
· Snapshot 71997
· Snapshot 72066
· Snapshot 72171
· Snapshot 72269
· Snapshot 72320
· Snapshot 72717
· Snapshot 72772
"Flingster मा क्याम मा हस्ते हानेरै काम चलिरहेको छ अहिले सम्म"
कठै बरी मेरो ब्रो … 😔🤪
Last edited: 14-Jan-21 10:17 PM
· Snapshot 72807
· Snapshot 72871
· Snapshot 72910
"लुक लाइक इटालियन भन्छन" - बिर्खे ब्रो
" इटालियन …कालो कपाल अनि गहुँ गोरो छालाको कमाल" - क्रिश्ने ब्रो
हे प्रभु सबलाइ नेपालि भएर नि इटालिएन स्टड धुक्कुर , म अभागी खाते बोकालाइ चैँ किन एक इन्चे एजियेन धुक्कुर ! 😭
बहुत नाइन्साफी प्रभु भाया …🙄
साला कोइ नेपाली बेबी गर्लले मेरो धुक्कुर देखेर रियाक्ट गर्न भो भने … कसम … आफ्नै धुक्कुर तन्काइ वरी पासो हाली झुण्डीन्छु म त् ! 😔
Last edited: 15-Jan-21 12:24 AM
· Snapshot 73100
Visitor is reading Looking foraroom in Detroit sorrounding area
Visitor is reading tityo satya lie show in corolodo
Visitor is reading IT Training Dallas ,TX
· Posts 410 · Viewed 21259 · Likes 495
Eklopan » butternut squash
· Posts 13 · Viewed 386 · Likes 11
· Posts3· Viewed 170
· Posts3· Viewed 666 · Likes 2
· Posts2· Viewed 166 · Likes 1
· Posts 14 · Viewed 3478 · Likes 14
· Posts 10 · Viewed 629 · Likes 4